सरकारले ल्यायो वर्तमान आर्थिक अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र – Himalaya TV
Home » समाचार » सरकारले ल्यायो वर्तमान आर्थिक अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र
सरकारले ल्यायो वर्तमान आर्थिक अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र
१६ चैत्र २०७४, शुक्रबार १७:२३
काठमाण्डौ, १६ चैत्र । सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै अर्थतन्त्र अनौपचारिक रूपमा रुमलिएको बताए । उनले वैदेशिक सहायता आउन कम भएको र रेमिटेन्स समेत कम भएको बताए ।
स्रोत सुनिश्चितता दिने र अर्को वर्ष स्रोत सुनिश्चितताको बजेट विनियोजन नहुने वित्तिय अराजकता बढेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट अनुशासन उल्लघंन भएर देशको ढुकुटी रित्तो हुने अवस्थामा पुगेको बताए । आर्थिक वर्ष २०४९–५० मा रु. २२ अर्बको व्यपार घाटा रहेकोमा २५ वर्षको अवधिमा यस्तो घाटा करिब ४२ गुणाले बढी गत आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा रु. ९ खर्ब १७ अर्ब पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ७ महिनासमम्ममा यस्तो घाटा रु. ६ खर्ब १४ अर्ब पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्पादन संरचना नै आयातमुखी हुनु र रेमिट्यान्स आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई बढी उपभोगमुखी बनाउँदा आयात बढेको अर्थमन्त्रीले बताए । युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित हुनुपर्ने वाध्यताले आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा भारी गिरावट आउँदा आयात बढेको अर्थमन्त्रीको ठहर छ ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम सात महिनामा रु ६ खर्ब ६१ अर्बको सामान आयात भएको छ । कृषिप्रधान भनिएको मुलुकमा कृषिजन्य उत्पादनको आयात समेत उच्च रहेको देखिएको छ । उहाले संस्थागत लगानीकर्ताको न्यूनता र वित्त बजारमा तरलताको अभावसँगै बढ्दो ब्याजदर र सेयर निष्काशनरआपूर्तिको वृद्धिले सेयर मूल्य प्रभावित भएको बताउनुभयो ।